Lokhu experiment elithakazelisayo zingabekwa abantu babo bonke ubudala emhlabeni wonke. Ngaphandle kwezwi, nje hudula indoda Rubik sika Cube. Ungawaniki imikhondo noma imiyalelo, nje ukubona ukuthi kwenzekani. Abantu abaningi bazozama ukuqoqa izakhi ayisishiyagalolunye umbala ofanayo phezu ngamunye ubuso eziyisithupha ligijima. Imibala yendabuko we puzzle - mhlophe, zibe bomvu, zibe luhlaza okwesibhakabhaka, orange, ophuzi kanye oluhlaza. Umuntu onikezwe ithoyizi ezandleni okokuqala, ngokushesha uphendulela ukubeka ndawonye ohlangothini olulodwa kuphela. Khona-ke udinga ukusebenzisa ukucabanga okunengqondo noma usebenzise busebenze-amathiphu. Riddle Cube le Rubik sika kubhekwa isixazululekile lapho izakhi ohlangothini ngalunye kuyodingeka nombala ofanayo.
Njengoba ithoyizi elula unqobile izinhliziyo izigidi
Uma uthi nhlá, kubonakala sengathi iphazili elula solution yayo isobala. Nokho, kusukela ngo-1980, cube the Rubik ngokushesha baba ithoyizi ethengiswa kakhulu kunazo kamakhi Ideal Toy Corp. Le nkampani ezinze eNew York yasungulwa by basemazweni okufika Russian-Jewish Michtomom Morris kanye nomkakhe, uRose. Kodwa ngokushesha entsha umbhangqwana oshadile ezikhishwe omunye ethengwa kakhulu - a-teddy bear Teddy futhi puzzle ethakazelisayo elahlekile izikhundla zabo. Futhi nakuba kulezi zinsuku boom ku cube the Rubik sika sesivele sidlulile, kodwa ahlale abalandeli uyaqiniseka ukwakha iphazili ngakuthathu zezibalo.
Ubani emhlabeni wonke ngokushesha?
Kukhona ngisho inhlangano mahhala cube Okwezwe Rubik sika eqhutshwa ngaphansi kohlelo olubizwa ngokuthi yi-World Championships ijubane inhlangano amathoyizi. Ngamunye amalungu kufakwe lokhu kuhambisana, ufuna ukuvuselela irekhodi emhlabeni futhi okungenani isikhathi ngibe usaziwayo. Lamanje irekhodi lomhlaba sabhalwa ngonyaka odlule futhi kungokwalabo ngokuphelele kwabasebasha umDashi Matsu imiqulu. ngonyaka Nesithupha ingane endala unqobile isikhathi ufanekisela 5,55 imizuzwana.
Manje ithoyizi elincane ukuqoqa - ke kuyokushiya umangele akekho. Manje, uma ekuphumeni ukwenza honing filigree amasu ifa iminwe - zako kungenye indaba. Akumangalisi ukuthi iningi labafundi bahlakaniphe, ezahlukene umbani yokusabela. Ngaphezu kwalokho, abantu abasha bancintisane ikhono. Ngokwesibonelo, irekhodi ukuhlangana lo Rubik sika Cube usebenzisa izinyawo, esilotshwe 2012, kungokwalabo umfundi Indonesian Fakhri Rayhan. Isikhathi sakhe kumnandi sima emhlabeni 27,93 imizuzwana. Akuwona wonke fan of emaphazili bangakwazi ngiziqhayise yesibili ophumelela kangaka, okwenza zokukhwabanisa ngesandla. Ngawo lowo nyaka, i-Australian feliks Zemdegs oneminyaka engu-18 ubudala ephethwe ukuba babuthane ithoyizi, usebenzisa isandla esisodwa kuphela. Qopha isikhathi abafana - 9,03 imizuzwana.
Nokho, kule puzzle kukhona into ethakazelisayo. Kungenjalo, indlela ayiphethe yini ukubandakanya ukubukwa ezigidi zabantu emhlabeni wonke iminyaka engaphezu kuka-? Libuye kungamangalisi ukuthi ekhulwini lama-21, ngo-kuba khona kwathishelanhloko losebenta ezihlukahlukene futhi eziyinkimbinkimbi ikhompyutha isiqophi imidlalo enjalo, abantu basaqhubeka ukuthatha i cube Rubik sika.
I enhle ukuma isikwele
Zonke ndaba oluthile elula futhi izinhlaka zezinkulumo ekahle. Cube Rubik iklanyelwe ngendlela elingana kahle esikhaleni phakathi wezandla zomuntu. Lokhu iphazili akasoze ngizithola, ngoba zingaxazululwa ngezindlela eziningi. Bright umbala imiphetho plastic ukudala azungeze ngokwabo isimo esihle. Lona ngokoqobo kakhulu ngasekupheleni kwekhulu lama-20, kodwa cube the Rubik kwakungu eyandulela bokusungula, futhi akalilahlile kwayo ngokuhamba kwesikhathi.
Njengoba isibonelo singakhumbula ibhodi imidlalo efana chess kanye Backgammon. Nge okubeka obala ukufana weJiyomethri kulezi imidlalo kunomehluko ayisisekelo. Uma chess udlalwa abaphikisi ezimbili, cube the Rubik sika uya ephathini wedwa. Yiqiniso, ngaphakathi iphazili abathandi amakilabhu kungaba ithimba imincintiswano ku imithetho kusengaphambili. Nokho ababambiqhaza wasala yedwa izikhathi nezinzwa zabo. Mhlawumbe uyalingwa ngabaningi babo.
Ubani okufanele sibonge kokusungulwa le nto?
Ngesisekelo eyisisekelo amathoyizi kufanele umqophi Hungarian Erno Rubik. Uprofesa bokwakha kwelinye amayunivesithi Budapest, ekuqaleni wahlela ukwakha incwadi kubafundi bakhe ukufunda izisekelo kwemfundiso yokuziphendukela zezibalo kanye isikhala ezintathu-ntathu. Ngaphambi umsunguli Kwakuwumsebenzi elula - ukwakha cube enama-asi ligijima, lapho ezinyakazayo kungawephuli ubunye amathuluzi ezakhayo. I usizo lokuqala ezibukwayo senziwa ngokhuni lalinabashumayeli 27 cubes anemibala.
test ndlela, kwanqunywa ukuba balahle konke engadingekile. Ngakho ngahamba e-eksisi eqonde ngqo maphakathi ne cubes eziyisithupha nambili ohlangothini izakhi azixhunywe, ngamunye eyayihlanganisa imibala emibili, futhi tristimulus izakhi eziyisishiyagalombili ahlelwe naphezu kwamagumbi isakhiwo. I-axis emaphakathi hhayi ligijima, ukugcina ubuqotho design, ibekwe ngaphakathi indlela uhlelo lokubopha. cubes Dihedral futhi trihedral kukhona ngezinhlamvu ezihlelwa ngesandla.
Ngemva kweminyaka emithathu puzzle efika e-Hungary izitolo. Amathoyizi bokuqala kwakufanele zamanje kabili njengoba esindayo, futhi yokuthengisa ngenxa ukulinganiselwa ebekwa Hungarian Communist Party osomabhizinisi yangasese, yayincane kakhulu.
Sabalalisa ithoyizi emhlabeni wonke ubophekile uTibor Lakzi
Mhlawumbe Izwe lalingeke liphinde zizwile kokusungulwa brilliant, uma kungenjalo usomabhizinisi German kanye lover of puzzle zezibalo uTibor Lakzi. Ekuqaleni kuka-1980 lo somabhizinisi waya ezweni lawo zomlando, futhi unesithakazelo kakhulu acacile ithoyizi ngakuthathu. Ngokuvumelana kwabo umsunguli, sekuyinto on cube magic Nyurnburgskuyu Toy Fair, lapho liqala ukuzungeza kwayo okunqobayo emhlabeni wonke. Ngokushesha kwakukhona abantu smart ngubani athonya inkampani Ideal Toy Corp ukutshala eningi ekukhiqizeni. Amathoyizi kwathengiswa efana amakhekhe ashisayo. Ngokushesha Erno Rubik baba abacebe yangasese lamaKhomanisi ngabanye Hungary.
Okwamanje, umsunguli uyaqhubeka esebenza e Budapest, e studio yakhe yangasese. Ngaphezu kwalokho, Erno Rubik wadala Isikhwama sokusiza abaqambi Hungarian nabaqambi. A Speedcubers Umhlaba Association ikhuthaza amalungu ayo ukuba ngcono amakhono inhlangano. Manje abantu ukuqoqa ithoyizi ezazivalwe amehlo, ngisho ngaphansi kwamanzi, ubambe umoya wakhe. Okwamanje, akusiyo nje inzuzo lesikhala ngakuthathu, ukuhlangana cube the Rubik sika isibe magic show real.
Hamba izingane kusukela ngonyaka 1: intengo, abakhiqizi